ISOFTWARE EYI-15 YEDISK DESIGN (YASIMAHLA KUNYE NENTLAWULO) - IIPATIO KUNYE NEEDEKSI
Eyona Iipatio Kunye Needeksi Isoftware eyi-15 yeDisk Design (yasimahla kunye neNtlawulo)
Nazi iiprogram ze-software ezili-15 ezikhululekile kunye nehlawulelwayo zokuyila ukukunceda wenze indawo yakho yokuhlala yangaphandle.
Ukujonga ukwenza i-DIY Deck kwaye ungazi ukuba ungaqala ngaphi? Jonga ezi nkqubo ukwenza uyilo olwahlukileyo kumgangatho wephupha lakho! Uninzi lwezi nkqubo luya kunceda ngokuvumela, izixhobo kunye nokukhetha uphawu, amaxabiso kunye nobungakanani bezinto ezifunekayo. Ungasathethi ke ngezixhobo zokubonisa ezimangalisayo ezifakiwe ukukunceda ubone uyilo loyilo kwaye luza kujongeka kanjani kwiyadi yakho yangasemva.
Nazi ezona nkqubo zesoftware ziyilo lungcono esinokuzifumana ngo-2018 zidweliswe kungekho myalelo uthile. Ukuba ufuna Isoftware yoyilo lwangaphakathi Cofa apha.
1. Umyili weAzek Deck (Simahla)
Ngokusebenzisa iTimberTech, ngeemveliso zoKwakha ze-AZEK unokufumana inkuthazo kunye nokwenza uyilo lwe-3D. Le nkqubo ineemveliso ezingama-140 + ezinokuthi zikhethwe ekusebenziseni ukukhanyisa kwe-AZEK kunye ne-TimberTech, i-railings, decking, izincedisi kunye nayo nayiphi na into eyimfuneko xa kusenziwa ipaki yangaphandle! Bavumela abasebenzisi ukuba bavavanye isoftware kwaye iyafumaneka kwivenkile yeapps ye-IPads.
Le nkqubo inezinto ezinje ngomfanekiso okhawulezayo, ekuvumela ukuba uqhoboshele ifoto yakho. Zininzi izinto onokukhetha kuzo kwiitemplate zangaphambili ezenziweyo ukubonisa uyilo kwimeko yokwenyani eyongeziweyo.
Elona cala lililo kule nkqubo lelo livumela kuphela iimveliso eziyinxalenye yophawu kwaye zifumaneka kuphela kwi-IPads. Ukusebenzisa ngokufanelekileyo le software kuyacetyiswa ukuba usebenzise chrome, firefox, safari okanye Microsoft Edge. Le nkqubo isimahla emva kokwenza iakhawunti.
Jonga ividiyo ye-Aztek yokufundisa apha:
Indawo yeWebhusayithi: https://timbertech.com/inspiration/deck-designer
2. ISmartDraw (ihlawulwe)
Umyili we-SmartDraw's Deck ufumana amanqaku e-5 avela kubahleli be-CNET. Le nkqubo ivumela ukurhuqa ngokukhawuleza kunye nokuwisa izinto ezinje ngeebhodi, ukurhola, ukutyala kwaye ungongeza ifanitshala.
kukude kangakanani uthumela ukugcina imihla
Babandakanya imifanekiso yemigangatho yokuphakama, inkxaso kunye neebhodi zomhlaba, izityalo kunye neentyatyambo, iibhafu ezishushu kunye neJacuzzis, iiambrela, ifenitshala yepatio kunye neebhentshi. Banepakethi yomhlaba egqibeleleyo enokuguqula iprojekti yomgangatho uyilo lonke lwasemva kwendlu.
Bukela ividiyo ngendlela yokuseta isicwangciso se-Smartdraw:
Indawo yeWebhusayithi: https://www.smartdraw.com/deck-design/deck-designer.htm
3. Umyili weDisk Deck (Simahla)
Isoftware yoMyili wedesika ikwaxhaswe yi-TREX, ke ngoko iya kusebenzisa izinto ezininzi ezifanayo kunye nezixhobo. Umyili wedesika uyakuvumela ukuba ulahle iimilo kumgangatho, wongeze amanqanaba amaninzi kwaye ungeze izitepsi apho kufuneka khona.
Isoftware yoyilo lwidesika iya kufumana isicwangciso sokungenisa sokuvumela kunye nokwenza uluhlu lwezinto zeprojekthi yakho. Ukuze usebenzise le software, kuyakufuneka ubhalise ukwenza kunye nokugcina iprojekthi. Le yinkqubo yasimahla kwaye inokufumaneka kwiidesika.com
Decks.com ividiyo yoyilo yomgangatho wesiko:
Indawo yeWebhusayithi: https://www.decks.com/deck-designer
4. UMyili weDesika yoMyili + noMcwangcisi (Simahla)
Ukuze usebenzise umyili weLowes kunye nomcwangcisi kufuneka ube neJava 1.4 kunye neAdobe Acrobat 3.0+, akukhoxhala ukuba awuyenzi, iyakubavumela ukuba bakhuphele.
Nje ukuba ukhutshelwe uya kuyalelwa ukuba uqale ekuqaleni okanye uqale ngenye yeekhonkco ezilungiselelwe kwangaphambili ezazilayishwe ngaphambili. Ukusuka apho unokuyila iplanga lakho lamaplanga ngeeplanga, ngeziporo, ngezinyuko, njlnjl. Le yinkqubo yasimahla.
iKhabhinethi yekhitshi yecherry
Yakha uyilo lomgangatho kunye nevidiyo yoyilo:
Indawo yeWebhusayithi: https://www.lowes.com/cd_Deck+Designer+Planner_733683095_
5. IDepho yaseKhaya: Yenza ngokwakho isiCwangciso seDisk
Idepho yekhaya ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokwenza ngokwakho oko kuthetha ukuba banamava kweli sebe. Le nkqubo ikuqala ngaphezulu kwe-70 eyakhelwe kwiitemplate ukunceda ukuqala. Inkqubo iya kuthi emva koko iprinte uluhlu lwazo zonke izinto oya kuzifuna kuyo yonke iprojekthi kubandakanya nexabiso oza kulihlawula ngokubonelelwa ngezixhobo.
Ukuqhuba le nkqubo uzakufuna inkqubo yeWindows ene-Intel 1700 Quad Core CPU, 4GB yendawo ekhoyo yeHard Drive, kunye nonxibelelwano lwe-Intanethi. Le yinkqubo yasimahla exhaswa ziiprojekthi zangaphandle zeEdgenet.
Ividiyo yesoftware yasekhaya eDepho yasimahla:
Indawo yeWebhusayithi: http://homedepot.bighammer.com/cqdesignstartneo/
6.SketchUp & Sketchup Pro (Simahla & ehlawulelweyo)
ISketchup iqhele ukusetyenziswa kwizicwangciso zemfundo kunye nezobugcisa. ISketchup ifumaneka ngohlobo lwasimahla kunye nepro (ehlawulelweyo). Inguqulelo yasimahla iyafumaneka kwisikhangeli sewebhu. Oku kuyakuvumela umsebenzisi ukuba azobe, atyhale kwaye atsale ukuphuma, ajikeleze isikrini kwaye ongeze imibala kunye nezinto. Inguqulelo yasimahla iyafumaneka kwiapp.sketchup.com apho ungaqala khona ngokukhawuleza. Inezinto ezivumela ukusebenzisana kunye nokwabelana ngeempawu. Oku kunokusetyenziselwa ukushiya iimpendulo kunye nezimvo okanye ukwabela abanye imisebenzi kunye nokubona imbali yotshintsho olwenziwe.
I-Sketchup Pro inezinto ezininzi nangakumbi kwinguqulelo yasimahla yoko. Ipro ingasetyenziswa kwiinkqubo zokusebenza yeWindows okanye zeMAC. Ipro ifuna i-3D yeklasi yemizobo yevidiyo yi-NVDIA okanye i-AMD, abayicebisi imifanekiso esekwe kwi-Intel okwangoku kodwa basebenzela ukuyifaka. I-Sketchup Pro inokwenza imidwebo engapheliyo, kubandakanya imizobo enesikali, imidwebo etywiniweyo, amaxwebhu enkcazo, indlela yokuhamba, kunye nokuba ichaneke kakhulu kwaye ineenkcukacha.
ISketchup Pro ingathengwa nge $ 695. Kukwakho nezinye iindlela zokuphucula, ukuvuselela kunye nezaphulelo zeelayisensi zemfundo.
Bukela isakhiwo somgangatho wevidiyo yeSketchup Pro:
Indawo yeWebhusayithi: https://www.sketchup.com/buy/sketchup-pro
7.I-MoistureShield Dream Deck Designer (Simahla)
I-Moisture Shield Dream Deck Designer yenye inkqubo ekhawulezayo nekulula ukuyisebenzisa kwaye iya kukuvumela ukuba uprinte uluhlu lwezinto eziyimfuneko kwiprojekthi eyiliweyo. Isoftware iya kuba sisixhobo sokwenza kunye nokugcina uyilo oluninzi ukuba awuqinisekanga kokhetho olufanelekileyo, iya kukuvumela ukuba ukhethe ubungakanani, imilo kunye nombala wedesika.
Indawo yeWebhusayithi: http://www.moistureshield.com/deck-design-tools/design-a-deck/
8. UMlinganisi weDikidi leMardard (Simahla)
I-Menards Deck Estimater iya kukuvumela ukuba wenze iphupha lakho ngasemva kwi-3D kuyo nayiphi na ikhompyuter okanye nakweyiphi na ivenkile yakwaMenard. Le nkqubo iya kwenza uluhlu lwezinto ezifunekayo kwiprojekthi yakho yangasemva. Esi sisoftware ekwi-intanethi kwaye iya kufuna usetyenziso lweJava, enokukhutshelwa kwisiza esidweliswe kamva.
Uyilo lweMenards yeCustomer Deck Estimator yinkqubo yasimahla.
Indawo yeWebhusayithi: https://www.menards.com/main/menu12/design-it-center/deck-estimator/c-13779.htm
9. Ukubetha ngenqindi! Uyilo lweNdawo (ihlawulwe)
Ukubetha ngenqindi! I-Landscape Deck kunye nePatio inguqulelo 20 inokusetyenziselwa ukwenza kunye nokuyila iindawo zokuhlala zangaphandle ngeseti epheleleyo yezixhobo zokucwangcisa, ukuyila, kunye nokujonga indawo oyifunayo. Le nkqubo inezinto ezithile ezintsha kubandakanya nokunikezelwa komgangatho ophezulu wejometri ye-2D kunye nesicatshulwa, izitayile zokuzoba ezizenzekelayo, ukukwazi ukungenisa kunye nokuthumela ngaphandle kwi-AUTOCAD 2018, ukhetho lwesicatshulwa esityebileyo kunye nokuguqula ibha yesixhobo.
Le software ifuna i-1GB ye-RAM kunye ne-3GB yendawo yediski ye-haard. Inkonzo ye-Intanethi iyadingeka ukusebenzisa le nkqubo. Ukubetha ngenqindi! Isoftware yokuma komhlaba iya kukuqhubela malunga ne- $ 39.99.
Indawo yeWebhusayithi: https://www.punchsoftware.com/punch-landscape-deck-patio-v20-download-windows
10. Isoftware yokuYilwa kwemiSebenzi yoMenzi weKhaya nguMyili oyiNtloko (ehlawulwe)
Umyili oyintloko ungomnye wabaphuhlisi abakhokelayo kunye nabapapashi be-3D yoyilo loyilo lwasekhaya, kwaye bakwaphuhlise isoftware yoyilo lomhlaba olufanayo ngoku. Oku kuhlala kusetyenziswa ngabayili bezakhiwo, abayili bangaphakathi, abayili bemeko-bume kunye nabaqulunqi basekhaya, nkqu nee-DIYers. Njengoko le yinkqubo enkulu ifuna iPC okanye iMac ubuncinci be-4GB yememori kunye ne-5 GB yendawo ekhoyo yediski kunye nokufikelela kwi-intanethi.
Le nkqubo inokuqeshiswa nge- $ 49 / mo kwaye inokufumaneka https://www.homedesignersoftware.com. Le nkqubo ikwafumaneka njengohlobo lwetyala kunye nokuthengwa. Uluhlu lwamaxabiso luxhomekeke kwinguqulelo oyikhethayo yi-Pro eyi- $ 495.00.
Iidiski kunye nokuLungiswa komhlaba zingenziwa kwiinguqulelo zeSuite, zoYilo kunye nezeNgcali, ubungcali kunye nolwakhiwo lubalwa ngcono. https://www.homedesignersoftware.com/products/product-chooser.html sisalathiso esifanelekileyo sokuthatha isigqibo sokuba yeyiphi eyona nkqubo isebenzela wena, ichaza amanqaku afumanekayo kuhlobo ngalunye lwenkqubo.
Indawo yeWebhusayithi: https://www.homedesignersoftware.com
11.Ingcinga Spectrum (ihlawulwe)
I-Spectrum ye-Idea yinkqubo elula yokusebenzisa ukuba inguqulelo ye-Architect iyakwenza uyilo lwe-3D yokuma komhlaba, uyilo ngaphezulu kwefoto yendawo ohleli kuyo ngoku, yongeza amanqaku amanzi (amachibi echibini, iingxangxasi) kunye nokwenza izicwangciso zokuma komhlaba kunye nemizobo ye-CAD kwaye kubandakanya izinto eziyi-17,000 zoyilo .
Ezinye izinto (kodwa azikhawulelwanga nazo) ukuba zonke iinguqulelo zinokufikelela kuzo: amachibi angaphambi kokuba kwakhiwe kunye ne-spas, iimveliso zelizwe ezili-15, ukukwazi ukungenisa iimodeli zesketchup, ukuyila indawo enye kunye neendawo ezininzi kunye nokongeza iipatio, ukugcina iindonga kunye nokujikeleza. Yeyona nkqubo inamathuba amaninzi.
Olu luvavanyo lwasimahla okanye ingxelo ehlawulelweyo enokufumaneka ku-https: //www.ideaspectrum.com/. Isoftware ye-Architect 2018 iya kubiza i- $ 399.95, i-Pro $ 99.95 kunye ne- $ 79.95. Oku kuyakuba kukuthenga kwangexesha elinye, kunye nokuphuculwa kwexesha elizayo kuhlala kufumaneka ngesaphulelo.
Bukela ividiyo ye-Idea ye-Spectrum yeXesha lokuHamba leNdawo yevidiyo:
Indawo yeWebhusayithi: https://www.ideaspectrum.com/
Isicwangciso 5D yinkqubo eguquguqukayo enokusetyenziselwa ukuyila iidesika zasemva kwendlu kunye neepatios, ukulungiswa komhlaba kunye nezinye iindawo ngaphakathi ekhaya. Inkqubo ngokwayo inika amandla okuyila kwi-2D kwaye emva koko ubone umsebenzi wakho kwi-3D epheleleyo ngomfanekiso opheleleyo wendlela uyilo oluza kujongeka ngayo.
ngubani onika iqela lokuzibandakanya
Kukho indawo enkulu yokugcina idatha yoyilo loyilo lweengcinga kunye nenkuthazo. Insiza inokukhutshelwa kwisixhobo sakho ngeVenkile yeApple okanye kuGoogle Play.
Indawo yeWebhusayithi: https://planner5d.com/?prcode=53ca04
13. UMyili weDiskhi yoMyili weTREX (Simahla)
I-TREX sisixhobo somyili esifumaneka kuzo zombini iinguqulelo zedesktop kunye neselfowuni. Oku kuyakwenza ukuba kube lula ukufikelela kunye nezinye iindlela onokuzisebenzisa. Ukuze usebenzise esinye sezi zixhobo, uya kukhetha ubungakanani bomgangatho kunye neziporo, emva koko ukhethe izinto ze-TREX kwaye ugqibezele. Inkqubo emva koko yenza uluhlu lwezinto oza kuzifuna. Le nkqubo inecandelo lokuodola iibhodi zeesampulu ukunceda uqiniseke ukuba uyifumana kanye le nto uyifunayo!
Indawo yeWebhusayithi: https://www.trex.com/build-your-deck/envision-your-deck/
14. UMyili weDiskhi yoMyili (Simahla)
Le nkqubo ibandakanya ukurhuqa ngokulula kunye neenketho zekliphu zokwenza indawo enesitayile esikhawulezayo nesilula esiya kukuvumela ukongeza izinto zombala kumzobo we3D. Banikezela ngegalari yezicwangciso zomgangatho, igalari yekontrakta kunye negalari yemveliso ukunceda kwimibono yoyilo lwakho.
Isixhobo seFiberon siza kuvelisa uyilo lomgangatho we-3D, uluhlu lokutshekisha ufakelo, kunye noluhlu lomthengisi wendawo kunye neekhontrakthi ezikufutshane nawe. Le yinkqubo yasimahla. Unokuzikhuphelela kwisikhokelo sokucwangciswa kwesimahla kunye nolwazi kubandakanya ukhetho loyilo lomgangatho, izixhobo ezifunekayo kunye nohlahlo-lwabiwo mali.
ndingazithenga phi iithoyi zesini
Bukela ividiyo usebenzisa isixhobo sokucwangciswa komgangatho weFiberon:
Indawo yeWebhusayithi: https://www.fiberondecking.com/design-tools/deck-design-tool
15. UMyTek Deck Designer (Simahla)
Le nkqubo yoyilo lwesoftware ilula kwaye inokwenziwa ngokwezifiso ngokupheleleyo. UMiTek Deck Designer uya kukuvumela ukuba ungeze amanqanaba amaninzi, ulwalathiso lweplank, ubungakanani kunye nombala, kunye nezinye iindlela ezininzi. Ekugqibeleni uya kunikwa ukuprintwa kwezinto ezifunekayo, uluhlu olusikiweyo kunye nemvume yokungeniswa.
Le nkqubo ayifuni naziphi na ii-plug ins kwaye ingagcinwa njengefayile ye-CDV. Le yinkqubo yasimahla ekwi-intanethi
Indawo yeWebhusayithi: http://tools.diyonline.com/servlet/GIB_Base/usp_startpage.html
Khetha Bonus: Simpson Strong-tie Deck Planner (Simahla)
Le nkqubo elula iya kukuvumela ukuba ugqibe uyilo lomgangatho ngokukhawuleza. Yinkqubo elula yokusebenzisa inkqubo kunye newebhu ngokupheleleyo esekwe ukuthintela ukhuphelo olukhulu. Inkqubo ikuvumela ukuba uyile ipakethe, emva koko uprinte uluhlu lwezinto kunye neemvume.
Umcwangcisi wedesika uya kunika iingcebiso kwaye akuvumele ukuba ubone izinto onqwenela ukuzisebenzisa kumgangatho. Le nkqubo iyafumaneka kwiinkqubo ezisebenzayo zeMac okanye iiwindows, kwaye kufuneka ibenekhadi lemizobo elinememori engama-64 MB ubuncinci. Le yinkqubo yasimahla.
Nayi ividiyo eneenkcukacha zesoftware yokuyila isoftware esebenzayo:
Indawo yeWebhusayithi: https://www.strongtie.com/products/go/software/deckplanner
Yeyiphi eyona Nkqubo yeDeski yoyilo ilungileyo?
Emva kokuphonononga amanqaku enkqubo nganye yesoftware yenye yezona zinto zibalulekileyo zokuthatha isigqibo sokuba yeyiphi esebenzayo kuwe yile nto uyifunayo. Ukuba ucwangcisa ukugqibezela iprojekti enye yendawo yokuhlala, eyadini yangasemva, enye yeenkqubo zesoftware yasimahla ezinikezelwa yenye yeempawu zokwakha ikhaya ngokubanzi ziya kusebenza ngcono kuwe.
Ezi nkqubo zesoftware yoyilo zihlala zakhiwe ngakumbi kubantu abanemvelaphi encinci kuyilo nakwizinto zokwakha. Oku kuyakuthetha ukuba isoftware iyakufuna umsebenzi ongezantsi kwaye iya kukhawuleza kwaye ibelula kubasebenzisi, kodwa oko kususa ulwenziwo oluncinci, kunye nemikhombandlela onokuthi ungene kuyo.
Iinkqubo ezimbini zokuma ezithandwayo ziiSmartdraw kunye neSketchup, ngelixa iPlanner5D inemisebenzi eyahlukeneyo yoyilo kungekuphela kweekhonkco, kodwa ukulungiswa komhlaba kunye neepatios ngokunjalo.
Kubaqulunqi bezakhiwo, okanye abakhi beekhonkco zobungcali, iinkqubo ezihlawulwa ukusebenzisa okanye ukuhlawulwa ngokubhaliselwa ziya kusetyenziswa ngcono. Oku kuya kunika abasebenzisi abanamava ukufikelela kulungelelwaniso kunye nokukhetha ukugqibezela iiprojekthi ezininzi ezahlukeneyo kubandakanya uyilo lomgangatho. Rhoqo iinguqulelo ezihlawulelweyo zisetyenziswa ngabantu abaya kuba beyila iidesika, iipatios kunye nokuma komhlaba kubuchwephesha.
Njengoko uqaphela kwinkcazo ukuya phambili kwaye unezinto ezininzi zokulayisha, ixabiso liyenyuka. Nokuba ezinye iingcali azizukufuna zonke izinto ezinokubakho, yiyo loo nto ezinye iinkqubo zibonelela ngamanqanaba ahlukeneyo ngamaxabiso ahlukeneyo, ukuqhubela phambili ukulungiselela iiprojekthi zomntu ngamnye kunye nabantu. Enkulu okanye incinci, nayiphi na iprojekthi inokwenziwa ngokukhawuleza nangokulula ngoncedo loyilo oluncedwayo lweekhompyuter kwaye ezi zezona ziphambili kwintengiso kwaye kufanelekile ukuba zijongwe.
Ukuphefumlelwa ngakumbi nangakumbi jonga igalari yethu yasemva kwendlu uyilo lomgangatho kunye nemibono apha.
Imibono yomtshato yohlahlo-lwabiwo mali oluqinileyo
Ikhowudi yokunxiba esemthethweni esemthethweni